တရုတ် GMC အန်းဒရွိုက်ကား DVD, GMC က Android 4.4 ကား DVD, GMC က Android GMC ကား DVD ထုတ်လုပ်သူ
ဖေါ်ပြချက်:GMC အန်းဒရွိုက်ကား DVD,GMC က Android 4.4 ကား DVD,GMC က Android GMC ကား DVD,GMC အန်းဒရွိုက်ကား DVD 4.2.2,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > GMC အန်းဒရွိုက်ကား DVD
GMC အန်းဒရွိုက်ကား DVD ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, GMC အန်းဒရွိုက်ကား DVD, GMC က Android 4.4 ကား DVD ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, GMC က Android GMC ကား DVD R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
GMC Sierra အတွက် Android ကားအသံဖွင့်စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
GMC 2007-2012 ကားတစ်စီး DVD player ထိတွေ့မျက်နှာပြင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သံလိုက်အိမ်မြှောင် Wrangler ဘို့ဟာ android ကားတစ်စီး DVD GPS  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
GMC ယုကွန် / တာဟိုး 2007-2012 သည်အန်းဒရွိုက်ကားကို DVD Player ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
GMC ယုကွန် / တာဟိုး 2007-2012 သည်ကားတစ်စီးကို DVD Player ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကားတစ်စီး DVD Player ကိုအပြည့်အဝထိ GMC ယုကွန် / တာဟိုး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
7 လက်မ GMC ယုကွန် / တာဟိုးမှာ Android မော်တော်ကားမာလ်တီမီဒီယာ Player ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Player ကို Jeep သည်အန်းဒရွိုက် 7.1 ကားကို DVD  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
GMC Navigation ကို Android 6.0 စနစ် DVD ကို Player ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
2G RAM ကို 16G ROM ကိုစတီရီယိုနှင့်အတူ GMC 7409  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တာဟိုး 2007--20127လက်မ GMC ကားကို DVD player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အပြည့်အဝထိယုကွန် 2007--2012 ကားတစ်စီး DVD player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
GMC ANDROID CAR DVD ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အန်းဒရွိုက် 8.1 ကို GMC 2007-2012 မာလ်တီမီဒီယာ Player ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Yukon Tahoe 2007-2012 Android9car gps navigation နောက်ဆုံးပေါ် Android 10 operating system၊4+ 64G မှတ်ဉာဏ်၊ Octa-core CPU၊ အရည်အသွေးမြင့်စိတ်ကြိုက်ရေဒီယို RDS ပါ ၀ င်သည့် Tahoe Android 10 ကားသွားလာမှု။4* 50w...
GMC Sierra အတွက် Android ကားအသံဖွင့်စက်
GMC 2007-2012 ကားတစ်စီး DVD player ထိတွေ့မျက်နှာပြင် အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်း 1. GMC 2007-2012 ကားတစ်စီး DVD player ထိတွေ့မျက်နှာပြင်၏အဆိုပါသတ်မှတ်ချက်များနေသောခေါင်းစဉ်: HD ကိုမျက်နှာပြင်: 1024 * 600 OS ကို: အန်းဒရွိုက် 9.0 စနစ်က CPU ကို: Rockchip...
သံလိုက်အိမ်မြှောင် Wrangler ဘို့ဟာ android ကားတစ်စီး DVD GPS
သံလိုက်အိမ်မြှောင် Wrangler ဘို့ဟာ android ကားတစ်စီး DVD GPS Wi-Fi ကို built-in Compass ဘို့ဟာ android ကားတစ်စီး DVD GPS သင်သွားလေရာရာ၌, ပိုမိုမြန်ဆန် LTE ကို download speed ကများနှင့်အင်တာနက်ကိုပိုမိုသုံးစွဲနိုင်ဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ Built-in RDS...
GMC ယုကွန် / တာဟိုး 2007-2012 သည်အန်းဒရွိုက်ကားကို DVD Player ကို
GMC ယုကွန် / တာဟိုး 2007-2012 သည်အန်းဒရွိုက်ကားကို DVD Player ကို android ဖုန်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince အပါအဝင် GMC ယုကွန် / တာဟိုး 2007-2012 သည် 1.Android ကားကို DVD Player ကို, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက် 7...
GMC ယုကွန် / တာဟိုး 2007-2012 သည်ကားတစ်စီးကို DVD Player ကို
GMC ယုကွန် / တာဟိုး 2007-2012 သည်ကားတစ်စီးကို DVD Player ကို android ဖုန်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince အပါအဝင် GMC ယုကွန် / တာဟိုး 2007-2012 သည် 1.Car DVD ကို Player ကို, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက် 7...
ကားတစ်စီး DVD Player ကိုအပြည့်အဝထိ GMC ယုကွန် / တာဟိုး
ကားတစ်စီး DVD Player ကိုအပြည့်အဝထိ GMC ယုကွန် / တာဟိုး 1. ကား DVD Player ကိုအပြည့်အဝ features တွေထိုကဲ့သို့သောဂီတ function ကိုအဖြစ်အသုံးပြုသူများအဘို့ကပိုပြီးဖော်ရွေများနှင့်အဆင်ပြေပါစေ GMC ယုကွန် / တာဟိုး updated ခံခဲ့ရသည်မထိ, Google အသံရှာဖွေရေး...
7 လက်မ GMC ယုကွန် / တာဟိုးမှာ Android မော်တော်ကားမာလ်တီမီဒီယာ Player ကို
7 လက်မ GMC ယုကွန် / တာဟိုးမှာ Android မော်တော်ကားမာလ်တီမီဒီယာ Player ကို 1. စသည်တို့ကို GMC ယုကွန် / တာဟိုးမှာ Android မော်တော်ကားမာလ်တီမီဒီယာ Player ကို updated features တွေထိုကဲ့သို့သောဂီတ function...
Player ကို Jeep သည်အန်းဒရွိုက် 7.1 ကားကို DVD
Player ကို Jeep သည်အန်းဒရွိုက် 7.1 ကားကို DVD ---> ANDROID 7.1 OS ကိုကားမာလ်တီမီဒီယာအပေါ် up-to-နေ့စွဲ confirguration, ---> 2GB RAM ကို DD3 + 16GB ROM ကိုပြည်တွင်းသိုလှောင်မှု ချိတ်ဆက်မှုအတွက်အဆင်သင့် ---> WIFI 2.4G / 5G Dual-band ကို! 4G...
GMC Navigation ကို Android 6.0 စနစ် DVD ကို Player ကို
GMC Navigation ကို Android 6.0 စနစ် DVD ကို Player ကို 1. ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် 3G & Wi-Fi / App ကိုဒေါင်းလုပ် / 3D Navigation / ရေဒီယိုဖမ်းစက် / ကဘလူးတုသ် / Dual-ဇုန် / File ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု / HD 1080p ဗီဒီယို / ဆောင်ဘီးထိန်းချုပ်ရေး / ကြေးမုံ...
2G RAM ကို 16G ROM ကိုစတီရီယိုနှင့်အတူ GMC 7409
2G RAM ကို 16G ROM ကိုစတီရီယိုနှင့်အတူ GMC 7409 လုပ်နိုင်မှာ Android system ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်တယ်ရသောအစီအစဉ်များကို run 1. ကို Android 8.0 လည်ပတ်စနစ်, ။ 2G RAM ကို 16G ROM ကိုစတီရီယို DIY Main Menu ပြရန်နှင့်အတူ GMC 7409: ရှာရန်ဘား,...
တာဟိုး 2007--20127လက်မ GMC ကားကို DVD player
ထုပ်ပိုး: 3.5KGS / 370 * 330 * 270MM / ဆုကြေးဇူးကို box ကို Set
တာဟိုး 2007--20127လက်မ GMC ကားကို DVD player7ပြောင်းလဲနေသောနောက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်: တာဟိုး 2007--20127လက်မ GMC ကားကို DVD player-- မိမိစိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲနေသောနောက်ခံများအတွက် 1. မော်တော်ကား DVD ။...
အပြည့်အဝထိယုကွန် 2007--2012 ကားတစ်စီး DVD player
အပြည့်အဝထိယုကွန် 2007--2012 ကားတစ်စီး DVD player7ပြောင်းလဲနေသောနောက်ခံရရှိနိုင်ပါသည်: အပြည့်အဝထိယုကွန် 2007--2012 ကားတစ်စီး DVD player-- မိမိစိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲနေသောနောက်ခံများအတွက် 1. မော်တော်ကား DVD ။...
GMC ANDROID CAR DVD ကို
* ဒီကားကို DVD player GPS အညွှန်း function ကိုထောကျပံ့ * ဒီကားကို DVD GPS များအတွက်အရည်အသွေးမြင့်ဖြစ်ပါသည်, ကျနော်တို့ 12 လအတွင်းအာမခံပေးခြင်း, CPU Octa-core Rockchip PX5 Cortex A9 ဖြစ်ပါသည်, ပိုပြီးအစွမ်းထက်နှင့်ပိုပြီးတည်ငြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ *...
အန်းဒရွိုက် 8.1 ကို GMC 2007-2012 မာလ်တီမီဒီယာ Player ကို
အန်းဒရွိုက် 8.1 ကို GMC 2007-2012 မာလ်တီမီဒီယာ Player ကို 1, 32GB ကို USB / SD က Connection ကို: ကို USB နဲ့ SD က 32GB စွမ်းရည်၏အန်းဒရွိုက် 8.1 ကို GMC 2007-2012 မာလ်တီမီဒီယာ Player ကို slots, ဒီယူနစ် SD ကဒါမှမဟုတ် USB...
တရုတ်နိုင်ငံ GMC အန်းဒရွိုက်ကား DVD ပေးသွင်း
GMC, ကားနှင့်အတူအကောင်းဆုံးနှင့်အသုံးဝင်သော function ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်မှန် link ကိုကားတစ်စီးစတီရီယိုရှိသည်, လူတွေကားနေချိန်တွင်ကားမောင်းနိုငျသောကွောငျ့ကားတစ်စီး 4G ကစားသမားရေဒီယိုမှအသံဖြင့်အမိန့်ပေးပြုလူတွေ "ဟုအောင်သာစကားသံကို throug, လက်ထိတွေ့စရာမလိုဘဲမည်သူမဆိုခေါ်နိုင်ပါတယ် နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ပဌနာ "နှင့်, ကအချိန်မရွေးနှင့်သင့်အဘို့ dial ပါလိမ့်မယ်။
GMC ဘို့ကားတစ်စီး OBD ကစားသမားလူတွေအင်တာနက်ကိုရယူရန်ထိုသို့မြန်ဆန်တည်ငြိမ်ပြီးစမတ်ကလူရဲ့ဘဝအဘို့ဖြစ်၏, google စတိုးကနေ APP ကို ​​download လုပ်ပါမှ 3G dongle ကိုသုံးနိုင်သည်, အခြားအသုံးဝင်သောနှင့်ဖျော်ဖြေရေး function ကိုဖြစ်ပါတယ်။
GMC ဘို့ကားတစ်စီး mp3, ကစားသမားအင်တာနက်လှိုင်းအဘို့ကိုရွေးပါ, လူတွေအင်တာနက်ကိုသွားနိုင်ပါတယ်ကိုလည်းအသုံးပြုမှုကို 3G dongle မလိုအပ်ထိုသို့ပေးဆောင်ဖို့မလိုအပ်ပါ, အခမဲ့ wifi အသုံးပြုကြ, ကလည်းဒီနေ့ခေတ်ဘို့အကောင်းတစ်ရွေးချယ်မှုဟာ othe ဖြစ်ပါသည် wifi Development ပေါ်တွင်အခြေစိုက်စခန်း။
မော်ဒယ်: GMC ယုကွန် / တာဟိုး 2007--2012 များအတွက် GMC 2016.Car OBD ကစားသမားများအတွက်ကားကို 4G ကစားသမား
GMC အန်းဒရွိုက်ကား DVD GMC က Android 4.4 ကား DVD GMC က Android GMC ကား DVD GMC အန်းဒရွိုက်ကား DVD 4.2.2 E46 အန်းဒရွိုက်ကား DVD